egrep: ihe atụ nke iwu na GNU / Linux | Site na Linux
grep ọ bụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị eji na akara iwu GNU / Linux. N'agbanyeghị na ị bụ ngwa dị mfe, ọ na - enye gị ohere ịme ọtụtụ arụmọrụ. A na-eji ya ọnụ na paịpụ, iji nwee ike ịchọta isi ihe dị na mmepụta nke iwu gara aga, wdg. Ma enwekwara ngwá ọrụ a maara dị ka egrep nke ya na ya na-agba agba grep na -E nhọrọ.
E si na "Extended regex", nke bụ ihe na - eme ka nhọrọ --E na ihe ị nwere na egrep na ndabara na-enweghị iji nhọrọ ahụ. Nke ahụ bụ, ịnwere ike iji ya ogologo okwu. N'ime nkuzi a, agaghị m aga ịkọwa ihe okwu oge niile bụ, otu esi eji ya na ụdị dị na * nix. Aga m egosi ihe atụ bara uru nke ụfọdụ ihe bara uru ị nwere ike ime na egrep ...
grep, egrep, na fgrep yiri. N'ezie, egrep na grep -E na fgrep dakọtara na grep -F. Nke ahụ bụ, n'okwu metụtara anyị, ọ ga-atụgharịkwa usoro ahụ dị ka okwu oge niile.
Ị nwere ike chọọ akara ma ọ bụ okwu na otu ma ọ bụ karịa faịlụ, dịka ọ dịkwa na grep. Dịka ọmụmaatụ, were ya na ịchọrọ ịchọọ okwu ubuntu na faịlụ a na-akpọ snap.txt yana kwa faịlụ .txt niile dị na ndekọ dị ugbu a:
Search nwekwara ike ịbụ recursive Iji chọọ ọdịnaya niile nke ndekọ dị ugbu a:
Ruo ugbu a, achọrọ okwu ma ọ bụ ụdọ, ya bụ, iburu n'uche okwu ikpe na obere (okwu dị nro), mana ọ bụrụ n'ịchọrọ ime ya n'ọnọdụ enweghị mmetụ, n'agbanyeghị ma ọ bụrụ na ha bụ nnukwu ma ọ bụ lowercase, I nwere ike iji ihe ndị a (ọ bụrụ na ị gbakwunye w ọ na-ahụ naanị egwuregwu zuru ezu):
Gosi, ọ bụghị ihe ndabara, kama filenames ebe achọtara egwuregwu ndị ahụ:
Gosi naanị ụkpụrụ ma ọ bụ okwu nyocha ya n'ime akwukwo:
Cheta na inwere ike iji ohere niile iche n’echiche. Nwere ike ikpokọta ọtụtụ nhọrọ ahụburu, ma ọ bụ ịnwere ike ịkwado ha na nhọrọ ndị ọzọ dịka -A n na -B n, ebe n ọnụọgụ nke ahịrị ịchọrọ igosi tupu (Tupu) na mgbe (Mgbe) nke egwuregwu ma ọ bụ ha abụọ n'otu oge (C), ka ị wee hụ ihe gbara gburugburu egwuregwu ahụ:
Gbochie ahịrị ndị nwere egwuregwu ma gosipụta ndị na - adabaghị:
Ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike iji ọtụtụ okwu ma ọ bụ egwuregwu na -e. Iji maa atụ:
Ọ bụrụ na iji -c nwere ike gụọ ọnụọgụ ọkụ, ma ọ bụ tụgharịa ya na -v iji gosi ọnụọgụ nke ahịrị ndị edoghị anya. Ọmụmaatụ:
Na ọbụna gosi akara nọmba ebe egwuregwu ahụ mere, yanakwa ọnọdụ ọ nọ n'otu n'otu:
Na yana nkwupụta mgbe niile ike ya nwere ike gbasaa. Iji maa atụ, chọta ahịrị ga-ebido site na Hello wee kwụsị na, ma ọ bụ nke malitere site na hel na-esochi ya ihe ọ bụla ma egwuregwu bye pụtara n'otu n'otu:
* Mmezi iwu na-esote: ekele maka nkọwa nke onye na-agụ ya Manuel Alcocer enwewo m ike ịgbanwe iwu na-esote, ebe ọ bụ na e nwere njehie.
Ma ọ bụrụ na ị na-eche banyere ọdịiche dị na grep, nke a bụ ihe atụ ga-eme ka o doo gị anya ... N'ihe banyere iji grep na-enweghị -E ị kwesịrị iji ya usoro mgbapụ nke mere na ọ na-akọwa ihe odide pụrụ iche dị ka ndị dị otú a, ma ọ bụghị na ọ ga-akọwa ụkpụrụ dị ka ndị dị otú ahụ na-enweghị iburu ha n'uche. N'aka nke ọzọ, jiri egrep ma ọ bụ grep -E ọ ga-echebara ha echiche. Ọmụmaatụ:
Nke ahụ ga-adaba na:
Nke ahụ bụ, ọ ga-achọ ahịrị ndị ahụ malitere na nofork ma ọ bụ nogroup. Mana ọ bụrụ na ị jiri okwu mbụ nke grep na-enweghị usoro mgbapụ, ihe ọ ga-eme bụ ịchọ ihe ihe nlereanya mba (ndụdụ | otu):
I nwekwara ike chọọ ọkwa alphanumeric, ma ọ bụ ụkpụrụ ụfọdụ akọwapụtara, dị ka ịchọta ụfọdụ IP:
Ọ bụrụ n'ịchọrọ, ịnwere ike iji nkwupụta ndị ọzọ na-eme kwa oge iji mee nyocha ndị ọzọ. Ọmụmaatụ | ịchọta otu ihe ndabara ma ọ bụ nke ọzọ:
I nwedịrị ike ịchọta mkpụrụedemede obere, obere mkpụrụedemede, mkpụrụedemede mkpụrụedemede, ma ọ bụ mkpụrụedemede, wdg., na-eji okwu ndị ọzọ dị ka: [: alnum:], [: alpha:], [: digit:], [: lower:], [: print:], [: punct:], [: space:], [: elu:], wdg. Iji maa atụ, ịchọọ maka nnukwu mkpụrụedemede:
Enwere m olileanya na ọ ga - enyere gị aka ... N’oge na - adịghị anya, m ga - akọwapụta okwu oge niile na edemede etinyere ya ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » egrep: ihe atụ nke iwu na GNU / Linux
Okwu ole na ole ...
Na-akọwa iwu 'egrep' mana etinyela ihe dị iche na 'egrep' na 'grep', nke kwesịrị ịbụ ihe ọ bụ ebe a.
Na mmanu: ip -4 a | tee '[0-9] \_ +'
Na egrep: ip -4 a | egrep '[0-9] +'
Ahh, na nke a ezighi ezi, 'egrep "Ndewo. * Bye" example.txt'; ihe ịga nke ọma ebe a na-eme mgbe enwere akara na faịlụ ahụ nwere eriri 'Ndewo' nke ihe ọ bụla wee soro 'goodbye', akara ahụ nwere ike ịmalite ma kwụsị na ihe ọ bụla.
Nke a ga - abụ ihe isiokwu ahụ kwuru:
egrep '^ Nnọọ. * bye $' example.txt
Na nhọrọ niile, ma ọ bụ ihe niile (anaghị m akwụsị ịlele ya), bụ nhọrọ nke 'grep' ọ bụghị nke 'egrep' naanị.
Daalụ maka ikpesa mperi ahụ. Ihe ị na-ekwu banyere okwu mgbe niile, etinyela m ya na paragraf nke abụọ. M ga-arara otu ederede ha, n'ihi na ha dị ọtụtụ na isiokwu a ga-ewe oke ogologo. Ekele!
Na paragraf nke abụọ ị na-ekwu n'ụzọ doro anya, ma ọ bụ kwuo, na 'egrep' bụ utu aha nke 'grep -E', mana ị naghị enye ihe atụ ọ bụla nke iji 'egrep' na ụfọdụ okwu mgbe niile edepụtara dị iche karịa mgbe jiri 'grep'.
Edicrara otu isiokwu iji kọwaa nkwupụta ndị a na-agbatị na-ada m n'anya, n'etiti ihe ndị ọzọ n'ihi na enwere saịtị dị ka nke a anaghị akpọsa ma na-arụ ọrụ ozi dị oke mkpa maka obodo GNU: https://www.rexegg.com/
Anaghị m ede ebe a maka ịda mba, ebumnuche m niile bụ na ọ bụrụ na mmadụ gụọ ntinye a iji hụ ihe 'egrep' ma ọ bụ 'grep' na-eme, biko lee anya na isi mmalite ndị ọzọ, ntinye a enweghị ike ịbụ ihe ọ bụla, ọ na-akọwa. obere, jọrọ njọ, na-enye ozi dị oke mkpa ma nwee ike ịme mgbagwoju anya, ọkachasị maka ndị na-amaghị GNU yana ngwa ọrụ dị ike ọ na-enye.
N'ikpeazụ, ị gbakwunyela ma dozie ahụhụ ahụ m gosipụtara mgbe m kwuchara okwu (^ $). Dị ka ọ dị na saịtị ndị ọzọ, ị kwesiri ịkpọtụrụ onye mere mgbazi ahụ, ma ọ bụ opekata mpe kwuo na ọ bụ mgbazi, nke ahụ bụ akụkụ nke isi GNU, otu isi ntọala nke e jiri bido blọgụ a ma bụrụ furu efu.
Daalụ maka echiche gị.
Depụta ụdị ọhụrụ nke Zulip Server 2.1, ihe ọzọ na Slack